Ukukhula kwengeniso yeXiaomi kuyehla kwikota yesibini ye-2019 | I-Androidsis
Ukukhula kwengeniso yeXiaomi kuyehla kwi-Q2019 XNUMX
Alithandabuzeki elokuba XiaomiNamhlanje, nakwiminyaka ethile ngoku, yenye yezona zinto ziphambili ezivelisa ii-smartphone kwimarike zehlabathi. Ngokudibeneyo ne-Samsung, iHuawei, iApple kunye nezinye iimveliso, inezinto ezininzi ezithunyelwa ngekota zezixhobo zayo kwaye ikhona kwihlabathi liphela, kwaye kungekuphela nje ngee-smartphones zayo, kodwa nangeentlobo ezininzi zeetheminali ezibandakanya ibhalbhu yokukhanyisa ukunxiba kwaye -kuza kungekudala - iimoto.
Ingeniso yale nkampani yaseTshayina ikhule ngokukuko ixesha elide ngoku, kunye nokuhla okuncinci. Ukunyuka okuphezulu kwintengiso yayo kuxhaswe kukwamkelwa okwandileyo kokuba abathengi banike izixhobo zabo ezigqwesileyo ngexabiso elinomona lemali, kodwa ngoku kukho ukuhla okuncinci kunyuko lwengeniso yenkampani, kwaye yile nto sithetha ngayo ngoku.
Ngokutsho Reuters, Izabelo zikaXiaomi zilahlekile ngaphezulu kwekota yexabiso lazo ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, ngaphandle kwenkampani ichaza ukuba ukuthunyelwa kwayo kwe-smartphone kwikota yesibini kunyuke kwaya kwizigidi ezingama-32. Ingeniso yenkampani yekota yesibini, ephele nge-30 kaJuni, inyuke yaya kwi-51.95 yezigidigidi ze-yuan ($ 7.36 yezigidigidi) ukusuka kwi-45.24 yezigidigidi kunyaka ophelileyo. Ibingaphantsi kwe- $ 53.52 yezigidigidi elindelwe ngabahlalutyi, idatha evela Refinitiv, ngelixa ingeniso yomnatha yehle ngama-87% ukuya kwi-1.96 yezigidi zeerandi yuan. Okwangoku, inzuzo ehlengahlengisiweyo ye-3,64 trillion yuan yagqitha kwi-2,74 trillion elindelwe ngabahlalutyi.
Isabelo sentengiso sikaHuawei eTshayina sonyuke nge-31% kwikota kaJuni, ngokwenkampani yophando yentengiso CanalysNgelixa isabelo sikaXiaomi sehle ngesihlanu. Kodwa Canalys Uqikelelo lokuba ukuthunyelwa kukaXiaomi eYurophu kunyuke nge-48%.
IXiaomi, Oppo kunye neVivo basebenza kunye kwisisombululo sokwabelana ngeefayile kufutshane
IHuawei ibinokuba nefuthe kwinzuzo kaXiaomi. Kucacile ukuba, ngaphandle kokuthintelwa yi-United States, lo mvelisi akachaphazelekanga ngendlela engalunganga. Kwelinye icala, iqhubekile nokubhalisa amanani alungileyo, kwaye ngakumbi kwimakethi yaseYurophu naseAsia, apho ibalasele ngakumbi kunayo nayiphi na enye indawo emhlabeni. Ukhuphiswano lwamva, ekhaya (e-China), lunzima, kwaye u-Xiaomi akanako ukuthoba unogada kwanomzuzwana ngokuchasene nale nkampani nabanye. Ihleli ukuba ibonwe ukuba ibuyisa njani ukukhula kwayo - okanye igqitha kuyo - kamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukukhula kwengeniso yeXiaomi kuyehla kwi-Q2019 XNUMX
Ukusonga i-Motorola, i-RAZR 2019, iya kuba ngexabiso eliphantsi kuneemodeli zeSamsung kunye neHuawei
Idatha entsha evuzayo malunga ne-2019 Motorola RAZR